OEM & ODM Queen matrage na ndepụta Spring Costco Ahịa | Rayson
Mgbe ọtụtụ afọ nke siri ike na ngwa ngwa, Rayson etoola n'otu n'ime ndị ọrụ kachasị aka na ndị ọrụ na China. Nwanyị nwanyị nwanyị matrawed na igbe mmiri taa, Rayson na-ama elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo banyere matrages ọhụrụ a matrage na igbe mmiri na ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọtụrụ ngwaahịa anyị. Ọ ga-ejigide nhicha na ịsacha anya na-enweghị nsogbu nke fiber na-agbaji ma ọ bụ na-eme ka ọ ghara ịda mba.